I-2 Gang WIFI I-Wall Molded Socket Outlet Cover ka-SPY Ikhamera efihliweyo (i-SPY256) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG 2 Gang WIFI I-Wall Molded Socket Outlet Ikhava ye-SPY Efihliweyo Ikhamera (SPY256)
Umgcini wevidiyo ofihliweyo: Zincinci kakhulu kwaye zilula, ukuxhasa ikhadi le-SD ukuya kuthi ga kwi-32GB (engaqukwanga); Inkxaso yokurekhoda nokutshaja ngaxeshanye kunye nokurekhodwa kwevidiyo.
Ikhamera ye-Wi-Fi, lula ukusebenzisa: Inkxaso yeNgingqi kunye ne-Remote connect / WiFi umgama malunga ne-10m-20m, Ulawulo lwephasiwedi ukukhusela ubumfihlo bakho.
Ukufumanisa ukuhamba: Xa kuqhutywe isinyathelo, ikhamera iya kuqala ukurekhoda ngokuzenzekelayo.
Eziyimfuneko: Isisombululo seVidiyo: Inyaniso ye-HD 1280x720P, Zisa ividiyo eneenkcazo eziphezulu kunye nomgangatho womfanekiso. Malunga ne-10,000 mAh lithium ibhetri, ukurekhodwa kwevidiyo okuqhubekayo kweeyure ezingama-36 iiyure ezingama-48. Ukuqhagamshela kwifowuni / ithebhulethi / iPC ngokuthe ngqo ngokukhangela uphawu lwekhamera yeWiFi. Unokujonga ividiyo kwikhamera ngexesha langempela.
Isombululo seVidiyo: Inyaniso ye-HD 1280x720P, Thatha ividiyo ephezulu-definition and quality picture
Ukwakhiwa ngaphakathi kwe-10,000 mAh lithiri ibhetri: ukurekhodwa okuqhubekayo ukuya kwii-36 iiyure kunye neeyure ze-48.
Uncedisa ukufikelela kumakhadi e-32GB e-SD.
Khawufihle ngokulula ngaphandle kokuphawula. I-ofisi, uhambo, ivenkile, ikhaya elikhuselekileyo ekusebenziseni iindlela ezahlukeneyo (abantwana, izifuyo, i-babysitter, abantu abadala).
Xhuma ikhamera: iindlela ze-2: Ukubukwa kwendawo ngokusebenzisa i-WIFI yokudibanisa okanye ukujonga ubude obude.
Ibhetri yeLithium: Malunga ne-10,000 mAh
Ukurekhoda kwevidiyo eqhubekayo: ixhomekeke ku iiyure 36 ngeeyure ze-48 ngokukhawuleza.
6865 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje